ဆောင်းပါး > အသင်းတော် > အသင်းတော်များ၏တာဝန်
လူ့နည်းဗျူဟာများသည်အကန့်အသတ်ရှိသောလူသားနားလည်မှုနှင့်လူသားတို့ပြုလုပ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်အခြေခံသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မဟာဗျူဟာဖြစ်သောဘုရားသခင့်နည်းဗျူဟာသည်အခြေခံနှင့်အဆုံးစွန်အဖြစ်မှန်ကိုလုံးဝပြီးပြည့်စုံသောနားလည်မှုအပေါ်အခြေခံသည်။ ၎င်းသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ဘုန်းအသရေဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့လူနာများအကြားပdiseasesိပက္ခများမှသည်လူ့စိတ်ဝိညာဉ်၏တင်းမာမှုများအထိကမ္ဘာပေါ်ရှိရောဂါအားလုံး၏ခရစ်ယာန်ရောဂါသည်တိကျမှန်ကန်ပြီး၎င်းသည်လူ့အခြေအနေကိုမှန်ကန်စွာနားလည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
NT ၏အက္ခရာများသည်အမှန်တရားနှင့်အစဉ်မပြတ်စတင်သည်၊ သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့သည်“ အယူဝါဒ” ဟုခေါ်သည်။ NT ၏စာရေးဆရာများကကျွန်ုပ်တို့ကိုအမြဲတမ်းအဖြစ်မှန်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆိုသည်။ ဤအမှန်တရားအခြေခံကိုထုတ်ဖော်မှသာလက်တွေ့ကျကျအသုံးချနိုင်သည့်လက္ခဏာများကိုဆက်သွားသည်။ အမှန်တရားအပြင်အခြားအရာတစ်ခုဖြင့်အစပြုခြင်းသည်မည်မျှမိုက်မဲသနည်း။
ofဖက်theဝါဒစာအခန်းငယ်၌ရှင်ပေါလုကချာ့ချ်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြထားသည်။ ထာဝရတည်မြဲရေးအတွက်ရည်မှန်းချက်အတွက်မဟုတ်ဘဲအနာဂတ်ကိုတုန်လှုပ်စေသောအနာဂတ်စိတ်ကူးယဉ်မဟုတ်ဘဲဤနေရာနှင့်ယခုအတွက်ဖြစ်သည်။
ဘုရားကျောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဘုရားသခင်အားပထမဆုံးစိတ်ဝင်စားသည့်အရာကဘာလဲ။ သူသည်ဘုရားကျောင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုအဓိကစိတ် ၀ င်စားသည်မဟုတ်ဘဲချာ့ချ်ကဘာလဲ။ ဖြစ်တည်မှုသည်လုပ်ခြင်းထက် ပို၍ လုပ်ဆောင်ရမည်။ ဘုရားသခင့်လူမျိုးတော်၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာသဘောသဘာဝကိုနားလည်ရန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၏သဘောသဘာဝကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ခရစ်ယာန်များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှုခရစ်၏စင်ကြယ်သောအကျင့်စရိုက်နှင့်သန့်ရှင်းမှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လောက၏ကိုယ်ကျင့်တရားစံနမူနာရှင်များဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းချုပ်ဘုန်းတော်ကြီးဖြစ်စေ၊ သာမန်လူများဖြစ်စေခရစ်ယာန်စစ်သည်အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်း၊ ပြုမူဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်ခြင်းအားဖြင့်သူ၏ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပြသသင့်သည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌သန့်ရှင်း။ အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်သောငါတို့ခရစ်ယာန်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏သန့်ရှင်းခြင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်သင့်သည်။ ၎င်းသည်ဘုရားကျောင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။
သတိရ! ဝါကျ ခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့ကိုမျှော်လင့်သောသူကားအဘယ်သူနည်း။ သူ၏ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းရန်အသက်ရှင်ရန်ခေါ်တော်မူခြင်းခံရရန်ရည်ရွယ်ထားသောခရစ်ယာန်များကိုရည်ညွှန်းသည်။ ချာ့ချ်၏ပထမတာဝန်သည်ပြည်သူတို့၏ကောင်းကျိုးသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းကျိုးသည်ဘုရားသခင့်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဘုရားကျောင်း၏ပထမဆုံးတာဝန်မဟုတ်ချေ။ ငါတို့အသက်တာအားဖြင့်လောကီသားတို့အားထင်ရှားစေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်သည်ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းငှါငါတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူပြီ။ “ လူခပ်သိမ်းအတွက်မျှော်လင့်ချက်” ဖော်ပြသကဲ့သို့“ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ နှင့်အတူမြင်အောင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ”
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်က "မှောင်မိုက်ထဲကအလင်းကိုလင်းစေ" ခရစ်တော်၏မျက်နှာ၌ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုသိသောဥာဏ်တိုးပွားစေခြင်းငှါ၊ ငါတို့စိတ်နှလုံးကိုလင်းစေတော်မူ၏။
ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်အခြားသောသူမဟုတ်၊ အခြားသူမဟုတ်၊ ခရစ်တော်၏တမန်တော်ဖြစ်ကြ၏။ ထိုတိုက်ထောင့်အမြစ်ကျောက်ကား၊ ယေရှုခရစ်၏တမန်တော်ဖြစ်သတည်း။ သခင်ဘုရားအဘို့သန့်ရှင်းသောဗိမာန်တော်ဖြစ်၏။ ထိုသို့သောအားဖြင့်သင်တို့သည်လည်းဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်နေရာကျကြလိမ့်မည်။
ဤတွင်ဘုရားကျောင်း၏မြင့်မြတ်သောနက်နဲသောအရာဖြစ်သည်။ သူသည်မိမိလူမျိုးတွင်နေထိုင်သည်။ ဤအရာသည်ဘုရားကျောင်း၏ကြီးမားသောခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ပြီးမျက်မြင်မရသောခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့စေရန်ဖြစ်သည်။ ownဖက် ၃း၉-၁၀ တွင်ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာတစ် ဦး အဖြစ်မိမိ၏ဓမ္မအမှုကိုပေါလုဖော်ပြခဲ့သည် -“ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်၊ ယခုခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်၌၎င်း၊ အသိုင်းအ ၀ ိုင်းမှတစ်ဆင့်ဘုရားသခင်၏ထူးခြားသောဥာဏ်ပညာကိုကောင်းကင်ဒေသများရှိအာဏာပိုင်များနှင့်အာဏာပိုင်များအားသိစေနိုင်သည်။ "
ရှင်းနေပါတယ်။ အသင်းတော်၏တာ ၀ န်မှာ“ ဘုရားသခင့်ဉာဏ်ပညာတော်အကြောင်းကိုလူအများသိစေရန်” ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်လူသားများသာမကဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုကြည့်ရှုသောကောင်းကင်တမန်များကိုလည်းဖွင့်ပြသည်။ ဤအရာသည် "ကောင်းကင်ပေါ်ရှိအင်အားနှင့်စွမ်းအားများ" ဖြစ်သည်။ လူများအပြင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုဂရုပြုပြီးလေ့လာသင်ယူသောအခြားသတ္တဝါများလည်းရှိသည်။
အထက်ပါအခန်းငယ်များသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုခေါ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌နေသောခရစ်တော်၏စရိုက်လက္ခဏာကိုရှင်းပြရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သဘောထားများနှင့်လုပ်ရပ်များအားဖြင့်၎င်းကိုသက်သေပြရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက်ရှင်ခြင်းခရစ်တော်နှင့်ကြုံတွေ့ရသောဘဝပြောင်းလဲခြင်း၏အဖြစ်မှန်ကိုကြေငြာသင့်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုမလုပ်ဆောင်မှီကျွန်ုပ်တို့လုပ်သမျှသည်ဘုရားသခင်အတွက်ထိရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဖက် ၄း၁ တွင်ပေါလုက“ သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ထိုက်တန်သောလမ်းသို့လိုက်ခြင်းငှါ၎င်း၊
သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်တမန်တော်များ၏တမန်တော် ၈၊ အဖွင့်အခန်း ၄ တွင်ဤဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုမည်သို့အတည်ပြုခဲ့ကြောင်းကိုသတိပြုပါ။ ယေရှုသည်ခမည်းတော်ကိုမတက်ကြွမီတပည့်များအားဤသို့ပြောခဲ့သည် -“ သင်တို့အပေါ်သို့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သက်ရောက်သောအခါသင်တို့သည်တန်ခိုးကိုခံရကြလိမ့်မည်။ ယေရုရှလင်မြို့ မှစ၍ ယုဒပြည်၊ ရှမာရိပြည်အရပ်ရပ်၊ မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါ၏သက်သေဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ ။ "
ရည်ရွယ်ချက် (၃) အသင်းတော်သည်ခရစ်တော်အတွက်သက်သေခံရန်ဖြစ်သည်။
ချာ့ချ်ကိုခေါ်ခြင်းသည်သက်သေဖြစ်ရန်နှင့်သက်သေကိုရှင်းပြရန်နှင့်သရုပ်ဖော်ရန်ဖြစ်သည်။ တမန်တော်ပေတရုသည်သူ၏ပထမစာတွင်ချာ့ချ်သက်သေခံခြင်းအကြောင်းအံ့သြဖွယ်စကားလုံးပါရှိသည် - «Ihr dagegen seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, die heilige Volksgemeinschaft, das zum Eigentum erkorene Volk und sollt die Tugenden (Ruhmestaten) dessen verkündigen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat.» (1. ဓာတ်ဆီ 2,9)
ဖွဲ့စည်းပုံ "သင် ..... နှင့်သင့်ပါတယ်။ " ကိုသတိပြုပါ ၎င်းသည်ခရစ်ယာန်များအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားထားရာဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ကျိန်းဝပ်။ ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်း၏ဘဝနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုထင်ရှားစွာကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။ ဤတောင်းဆိုချက်ကိုခရစ်ယာန်များအားဝေငှရန်မှာခရစ်ယာန်တိုင်း၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ သူတို့အားလုံးကိုခေါ်ခြင်း၊ ဘုရားသခင့် ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်နေထိုင်သည်။ ၎င်းသည်Epဖက်မြို့သားများထံစာတစ်စောင်လုံးတွင်အသံထွက်သည်။ ချာ့ချ်၏သက်သေခံချက်ကိုတစ်ခါတစ်ရံအုပ်စုလိုက်အနေနှင့်ဖော်ပြနိုင်သည်၊ သို့သော်သက်သေခံရန်တာ ၀ န်မှာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာ ၀ န်ဖြစ်သည်။
စိတ်နှိမ့်ချခြင်း၊ သည်းခံခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊ စည်းလုံးခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်သခင်ယေရှု၏စရိုက်လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်များသည်မျက်မြင်သက်သေဖြစ်သင့်သည်၊ သို့သော်မာနထောင်လွှား။ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပြောဆိုသင့်သည်။ သင့်ထက် ပို၍ သန့်ရှင်းသောစိတ်ထားရှိခြင်း၊ ချာ့ချ်သည်သူ့ဟာသူအကြောင်းမပြောသင့်ပါ။ သူတို့သည်နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာဆက်ဆံသင့်သည်၊ သူတို့၏အာဏာကိုအပြင်းအထန်မတောင်းဆိုသင့်သို့မဟုတ်ပိုမိုလေးစားမှုရှိသင့်သည်။ ချာ့ချ်သည်လောကကိုမကယ်တင်နိုင်ပါ၊ ခရစ်ယာန်များသည်ဘုရားကျောင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်မဟုတ်၊ သူတို့၏အသက်တာစွမ်းအင်ကို၎င်းအတွက်အသုံးပြုရန်မဟုတ်ဘဲဘုရားကျောင်း၏သခင်အတွက်ဖြစ်သည်။
သူ့ဟာသူချီးမြှောက်နေစဉ်ဘုရားကျောင်းသည်၎င်း၏သခင်ဘုရားကိုမဆီးတားနိုင်ပါ။ ချာ့ချ်စစ်သည်ကမ္ဘာကြီးတွင်မျက်မှောက်ခေတ်တွင်အာဏာရရှိရန်မကြိုးစားပါ၊ အကြောင်းမှာသူ၌သူမနေထိုင်သောသခင်ထံမှသူလိုအပ်သောစွမ်းအားအားလုံးရှိပြီးဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်အမှန်တရားမျိုးစေ့သည်အပင်ပေါက်ရန်အတွက်အချိန်၊ ကြီးထွားရန်အချိန်နှင့်အသီးကိုသီးရန်အချိန်လိုအပ်ကြောင်းကို သိ၍ ချာ့ချ်သည်စိတ်ရှည်။ အလိုလိုကျွေးမွေးသင့်သည်။ ချာ့ချ်သည်လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်ကြာမြင့်စွာကတည်းကတည်ရှိခဲ့သောပုံစံတွင်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲမှုကိုရုတ်တရက်ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းအစား၊ ဘုရားကျောင်းသည်မကောင်းမှုများကိုရှောင်ရှားခြင်း၊ တရားမျှတမှုကိုကျင့်သုံးခြင်းနှင့်အမှန်တရားမျိုးစေ့များကိုဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သောလူမှုရေးပြောင်းလဲမှုကိုဥပမာပေးသင့်သည်။ ၎င်းသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်အမြစ်တွယ်လာပြီးနောက်ဆုံးတွင်ပြောင်းလဲမှု၏အကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေသည်။
သူ၏ရောမအင်ပါယာ၏ကျဆင်းသွားခြင်းနှင့်ကျဆင်းခြင်းစာအုပ်တွင်သမိုင်းပညာရှင်အက်ဒွပ်ဂစ်ဘွန်ကရောမတို့၏ပြိုလဲခြင်းသည်ရန်သူများကိုမဟုတ်ဘဲပြည်တွင်းပြိုကွဲခြင်းဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤစာအုပ်တွင်ဆာ ၀ င်းစတန်ချာချီသည်၎င်းကိုလျောက်ပတ်စွာနှင့်မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသည်ကိုတွေ့ရှိသောကြောင့်အလွတ်ကျက်မှတ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကျမ်းပိုဒ်ကျဆင်းနေအင်ပါယာအတွက်ဘုရားကျောင်း၏အခန်းကဏ္withကိုနှင့်ပတ်သက်သောသိသာသည်။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိခရစ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြည့်စုံစေနိုင်သည့်စည်းလုံးစေသောစွမ်းအားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းခြင်းကိုမည်သို့ရောင်ပြန်ဟပ်သနည်း။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှတဆင့် ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုအဘယ်သို့ထင်ရှားစေနိုင်သနည်း။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှတဆင့် ယေရှုခရစ်၏အဖြစ်မှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့သက်သေခံကြသနည်း။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှတဆင့်
NT တွင်နိုင်ငံရေးတွင်ပါ ၀ င်ခြင်း၊ မိသားစုတန်ဖိုးများကိုကာကွယ်ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တရားမျှတမှုမြှင့်တင်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုဆန့်ကျင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖိနှိပ်သောအုပ်စု၏အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ရန်ခရစ်ယာန်များအကြောင်းအနည်းငယ်သာပြောထားသည်။ ခရစ်ယာန်တွေဟာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပတ်သက်သင့်ဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူတစ် ဦး အားချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပြည့်နှက်နေသောစိတ်နှလုံးတစ်ခု ရှိ၍ မရ၊ သို့သော် NT သည်ဤအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်မျှသာပြောထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဘုရားသခင်သည်ဤပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်ပြတ်တောက်သောဆက်ဆံရေးကိုဖြေရှင်းရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာလူတို့၏ဘ ၀ တွင်ပြောင်းလဲမှုအသစ်ဖြစ်သောယေရှုခရစ်၏ဘဝပြောင်းလဲမှုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ယေရှုခရစ်၏အသက်တာသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမများကိုအမှန်တကယ်လိုအပ်သည်။ မှောင်မိုက်ဖယ်ရှားခြင်းအလင်း၏နိဒါန်းနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ အမုန်းတရားကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်အချစ်၏နိဒါန်းနှင့်စတင်သည်။ ရောဂါနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်ဘ ၀ စတင်ခြင်းနှင့်စတင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်ကိုစတင်မိတ်ဆက်ရပေမည်။
to ၀ ံဂေလိတရားသည်ငါတို့နှင့်ဆင်တူသောလူမှုရေးအခြေအနေတွင်ကြီးထွားလာသည်။ ၎င်းသည်မတရားမှု၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၊ ပျံ့နှံ့နေသည့်ရာဇ ၀ တ်မှု၊ အကျင့်ယိုယွင်းမှု၊ စီးပွားရေးမသေချာမရေရာမှုနှင့်ကြောက်ရွံ့မှုများကျယ်ပြန့်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူး။ မရနိုင်သောရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများကြားမှရှင်သန်ရန်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ သို့သော်အစောပိုင်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်၎င်း၏မတရားမှုနှင့်ဖိနှိပ်မှုများကိုတိုက်ဖျက်ရန် (သို့) ၎င်း၏ "မှန်ကန်သော" အခွင့်အရေးကိုပြenfor္ဌာန်းရန်တောင်းဆိုခြင်းကိုမမြင်ခဲ့ပါ။ အစောပိုင်းချာ့ချ်သည်ဘုရားသခင့်သန့်ရှင်းမှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းနှင့်ယေရှုခရစ်၏အဖြစ်မှန်ကိုသက်သေခံရာ၌၎င်း၏တာဝန်ကိုမြင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်၎င်းင်း၏ပြည်သူလူထုနှင့်အပြင်ဘက်ရှိလူများကိုအကန့်အသတ်မရှိချစ်သည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသခဲ့သည်။
သပိတ်မှောက်မှု၊ ဆန္ဒပြမှု၊ သပိတ်မှောက်မှုနှင့်လူမှုရေးချို့တဲ့မှုများကိုဖြေရှင်းရန်အခြားနိုင်ငံရေးလုပ်ရပ်များကိုသက်သေပြရန်ကျမ်းချက်များကိုရှာသူမည်သူမဆိုစိတ်ပျက်ရလိမ့်မည်။ သခင်ယေရှုကဤအရာကို“ အပြင်ပန်းကိုဆေးကြောခြင်း” ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်တဲ့ခရစ်ယာန်တော်လှန်ရေးကလူတွေကိုအတွင်းကနေပြောင်းလဲစေတယ်။ ၎င်းသည်ခွက်၏အတွင်းပိုင်းကိုသန့်ရှင်းစေသည်။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၀ တ်ဆင်ထားသောပိုစတာတွင်သော့ချက်စာလုံးများကိုသာပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေတယ်။
ဤတွင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများသည်မကြာခဏလမ်းလွဲသွားတတ်သည်။ သူတို့သည်နိုင်ငံရေးအစီအစဉ်များကိုလက်ဝဲဘက်ဖြစ်စေစိတ်စွဲလမ်းသွားသည်။ ခရစ်တော်သည်လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုပြောင်းလဲရန်လောကသို့ကြွလာခဲ့သည်။ သူ၏အစီအစဉ်မှာသူသည်ထိုလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိလူတစ် ဦး ချင်းစီအားနှလုံးအသစ်၊ စိတ်အသစ်၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဦး တည်ချက်အသစ်၊ မွေးဖွားခြင်းအသစ်၊ နိုးထသောဘဝအသစ်နှင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုနှင့်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုသေခြင်း။ တစ် ဦး ချင်းစီသည်ဤနည်းဖြင့်အသွင်ပြောင်းသောအခါကျွန်ုပ်တို့တွင်လူ့အဖွဲ့အစည်းအသစ်ရှိသည်။
ဘုရားကျောင်းသို့ဘုရားသခင်အပ်နှင်းထားသည့်သတင်းစကားသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကြားသိခဲ့ရသောအနှောင့်အယှက်အရှိဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသတင်းကိုနိုင်ငံရေးနှင့်လူမှုရေးဆောင်ရွက်မှုများအတွက်ရွှေ့ဆိုင်းသင့်သလား။ ချာ့ချ်သည်လောက၊ နိုင်ငံရေးသို့မဟုတ်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကျေနပ်သင့်သလော။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်မှုအလုံအလောက်ရှိပါသလား။ သူ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၌နေထိုင်သောခရစ်ယာန်အချစ်သည်နိုင်ငံရေးအာဏာနှင့်အခြားလူမှုရေးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာများမဟုတ်ဘဲဤလောကကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်ဟုဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သဘောတူပါသလော။
ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒီအစွန်းရောက်၊ အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့၊ ဘဝပြောင်းလဲနေတဲ့ယေရှုခရစ်၏သတင်းကောင်းကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်လျှောက်ပျံ့နှံ့စေဖို့တာ ၀ န်ရှိသူတစ် ဦး ဖြစ်လာဖို့ဘုရားသခင်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ပညာရေးနှင့်သင်ယူမှု၊ အနုပညာနှင့်မိသားစုဘဝနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကိုဤ ၀ ိညာဉ်ရေး၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရသောသတင်းစကားဖြင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ပြန်လည် ၀ င်ရောက်ရမည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌သူ၏အဆုံးမဲ့ထာဝရအသက်ကိုစိုက်ပျိုးရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆီသို့ကြွလာခဲ့သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားချစ်ခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချထိုက်သောလူများအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်အသင့်ရှိပြီးသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝပြproblemsနာများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန်ခွန်အားရှိစေသည်။ ဤသည်မှာကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ဆင်းရဲခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောပင်ပန်းသောကမ္ဘာသို့ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းစကားဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ပုန်ကန်။ အပူတပြင်းသောကမ္ဘာသို့ယူဆောင်လာသည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်မျှော်လင့်ခြင်း၏သတင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းခြင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်ရန်၊ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေရန်နှင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအတွင်းနှင့်အပြင်သို့သန့်ရှင်းစေရန်ယေရှုကြွလာခြင်းကိုသက်သေခံရန်ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချင်းချင်းကိုချစ်ရန်နှင့်လောက၏ခရစ်ယာန်မေတ္တာကိုပြသရန်အသက်ရှင်ကြသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ဘုရားကျောင်းခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။